फेसन मास्कको- भिडियो - कान्तिपुर समाचार
चैत्र २६, २०७७ दिपेन्द्र रोक्का
काठमाडौँ — कोरोनाको विषम परिस्थितिमा पर्यायवाची बनेको मास्क हाल फेसन र प्रविधिको अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीले आफ्ना डिजाइनमा उतार्न थालेका छन् । नमुना कलेज अफ फेसन टेक्नोलोजीका १५ औं ब्याचका विद्यार्थीहरुले हाल आफ्नो ग्र्याजुएसनको अन्तिम परीक्षाका लागि यसको प्रयोग गर्न थालेका हुन्। प्रयोगात्मक कक्षामा विद्यार्थीहरुले गुडियामा बनाएको डिजाइन र त्यसमाथि प्रयोग भएको रंगीचंगी मास्क देख्न सकिन्छ। १०० अंकको यो परीक्षामा २५ अङ्क डिजाइनबाट, २५ प्रयोगात्मकबाट र र ५० अंक र्‍याम्प वाकबाट आउने छ।
विद्यार्थीहरुले बनाएका ७९ डिजाइनहरू मोडलले ३० गते काठमाडौंको सोल्टी होटलमा र्‍याम्प वाक गर्नेछन् । यो समयमा विद्यार्थीले बनाएको मास्क फेसेनेबल हुनुको साथसाथै यी डिजाइनले राम्रो बजार पाउने विश्वास कलेजकी प्रिन्सिपल ज्ञानीशोभा तुलाधरको छ । कोरोनाको समयमा अनिवार्य बनेको बनेको फेस र सर्जिकल मास्क एकै किसिमको लाउँदा मान्छेलाई अल्छी लाग्न सक्दछ त्यसैले फेसनमा पनि विभिन्न किसिमका ग्ल्यामरस मास्कको प्रयोग गरिएको तुलाधर बताउँछिन् । 'फेसन पनि भयो र जनचेतना पनि जगाउँछ भन्ने विश्वास छ मलाई,' पन्ध्रौं ब्याचकी पूजा न्यौपाने सुनाउँछिन् । यो ब्याचका ग्र्याजुएसन विद्यार्थीले आगामी सोमबार होटल सोल्टीमा आफ्नो फेसन सो प्रस्तुत गर्नेछन् ।
प्रकाशित : चैत्र २६, २०७७ १६:४१
बाघको पाइला पछ्याउँदै निकुञ्जमा...
बाघको ‘राजधानी’ बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा जोखिम मोलेर भए पनि बाघ हेर्ने रहर पूरा गर्न आन्तरिक र बाह्य पर्यटक जान्छन् ।
चैत्र २६, २०७७ गंगा बीसी
काठमाडौँ — फेरि बर्दियामा बाघले मान्छे खायो । पछिल्ले समय बर्दियाबाट आउने तातो खबर हो । यही साता पनि एक गैंडा गणकलाई बाघले मार्‍यो । त्यो बाघलाई नियन्त्रणमा लिएर ललितपुर चिडियाखानामा सारिएको छ ।
चार साताअघि निकुञ्जको किङ्गफिस क्षेत्रमा तीन डमरुसँगै देखिएको बाघ । तस्बिर : भवानी कँडेल
यो खबरले स्थानीयलाई त्रास थप्छ भने बाहिरका मान्छेलाई तात्तातो सूचना र सन्देश । जंगली बाघ हेर्ने रहर भए अन्त कतै नजानू । बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज जानू । यो कुरा सामाजिक सञ्जाल, सञ्चार माध्यामबाट ‘भाइरल’ भइसकेको छ ।
‘तपाईं हरु बर्दिया किन आउनु भएको हो ?’
त्यहाँ घुम्न जाने जो कोहीको मुखबाट फ्याट्ट निस्कन्छ, ‘बाघ हेर्न ।’ तर बाघ हेर्न भनेजस्तो सहज भने छैन ।
निकुञ्का कर्मचारी, निकुञ्ज घुमाउने गाइडले शुभकामना दिन्छन्, बाघ देख्ने अवसर मिलोस् । शुभकामना थोरैलाई पुरा हुन्छ, धेरैलाई हुँदैन । अब त थेगो नै भइक्यो– बर्दियाको बाघ, चितवनको गैंडा ।
बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज घुम्न जाने आन्तरिक र बाह्य पर्यटकले बाघ देख्ने अवसर कमैले मात्र पाउँछन् । त्यहाँ बाघ देख्‍न पाएका पर्यटक दंग हुँदै बाघको डरलाग्दो तर सु्न्दर बखान गर्दै फर्कन्छन् । बाघ देख्‍न नपाएकाहरु बाघको पाइला हेरेर फर्कन्छन् । बाघको आकर्षणले मान्छेलाई तानिरहेको छ । निकुञ्जभित्र र वरिपरि बाघले मान्छेलाई आक्रमण गरिरहेको छ । यो त्रासदीबीच पनि मान्छे बाघको ‘दर्शन’ गर्न बर्दियातिर लागेका छन् । बाघले बर्दिया चिनाएको छ, बर्दियाले बाघ होइन । बाघ बर्दियाभन्दा शक्तिशाली भएर होला । बाघ अघिअघि बर्दिया पछिपछि ।
बाघ हेर्ने रहर कसको हुँदैन र ? हामी त्यो रहर पुरा गर्न फागुन तेस्रो साता बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जतिर लागेका थियौं । बाघलाई गर्व, बहादुरी, डर, शक्ति, रक्षा र तपस्याको प्रतिक मानिन्छ । निकुञ्जका कर्मचारी भन्थे, बाघ हेर्न भाग्य पनि चाहिन्छ । धर्य पनि । हामीसँग धेरै दिन धैर्य गर्ने अवस्था थिएन । भाग्य त कसलाई थाहा हुन्छ र ?
हाम्रो टोलीमा बाघ हेर्न डर र रहर दुवै थियो । निकुञ्ज जंगलमा पैदल हिँड्दा डर र रहरसँगै बोकेर हिँड्नु परेको थियो । कतिबेला डरले जित्थ्यो भने कतिबेला रहरले । डर र रहर मिसिएको यात्रा अहिले सम्झदा खुब रमाइलो लाग्छ ।
बाघ हेर्ने रहर पुरा गर्न हामीले पुरा चार दिन खर्च गर्‍यौं । तीन दिन बर्दिया निकुञ्ज जंगल र एक दिन निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने महेन्द्र राजमार्गमा ।
एक साताअघि देखिएको बाघ । तस्बिर : भवानी कँडेल
करिब एक वर्ष कोरोनाका कारण सहर छोड्न पाइएको थिएनौं । लकडाउन खुलेपछि पनि काठमाडौं छोड्न सहज थिएन । मान्छेदेखि मान्छे डराउने अवस्था हुँदासम्म यात्रा गर्न त्रासले यात्रा गर्न गाह्रो भयो । बर्दियाको बाघ हेर्ने योजना कोरोना महामारी आउनु अघि नै बनेको हो । शहरमा बस्ने मान्छेलाई वनजंगल, वन्यजन्तुले आकर्षित नगर्ने कुरै भएन । बरु मान्छेले वन्यजन्तुलाई विकर्षण गराउँछ । किनकी मान्छे भर्सेज वन्यजन्तु जस्तो भएको छ । मान्छे वन्यजन्तु खोज्दै जाने, वन्यजन्तु भाग्दै रहने अवस्था मान्छेले सृजना गरेको हो ।
फागुन तेस्रो साता (२२ गते) पहिलो दिन । बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज पसेपछि चित्तलको बथान देखिनु सामान्य कुरा हो । चित्तलको बथानले साइत दियो । हाम्रो ध्यानचाहिँ केवल बाघतिरै थियो । बाघ जति डरलाग्दो, त्यतिनै आकर्षक पनि ।
बाघ हेर्नेको लागि मुख्य गन्तव्य निकुञ्जको तीनकुने क्षेत्र रहेछ । तीनकुने क्षेत्रमा बाघ आउनुको एउटै कारण हो सफा पानीको स्रोत । तीनकुने क्षेत्रमा विदेशी पर्यटकलाई आक्रमण गरेपछि झन् आकर्षणको केन्द्र बन्यो । सहरका कंक्रिटको जंगलमा वाक्क भएका मान्छेको लागि रुखको जंगल रमाइलै रमाइलो । जता हेरे पनि आँखालाई शीतल बनाउने दृश्यले शरीरमा रिजार्ज भएको मससुस हुन्छ ।
पहिलो दिन बाघ हेर्ने चाहना पुरा भएन । जंगल चाहारेर फकिैयौं । हामी मात्र होइन, त्यसदिन निकुञ्ज छिरेका पर्यटकले बाघलाई दर्शन गर्ने मौका पाएनन् । शुक्रबार र शनिबार बाघ हेर्न जंगल छिर्ने पर्यटक धेरै भएको हुनाले बाघ बिच्किने निकुञ्जका कर्मचारीले जानकारी दिए । त्यसकारण बाघ हेर्ने हो भने केही दिन कुर्न सुझाव हामीलाई दिए ।
निकुञ्जु छिर्ने बेला निकञ्ज, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष र पर्यटन व्यवसायीले भन्छन्,‘गुडलक, बाघ हेर्ने मौका मिलोस् ।’ हामीलाई पनि त्यसै भनिएको थियो । निकुञ्जमा बाघ नदेखिएपछि हामी त्यही दिन बेलुका बर्दियाकै कोठियाघाटतिर लाग्यौं । नेपालको लामो सडक पुल कोठियाघाटबाट देखिने सूर्योस्त नदीमा डुबुल्की मारेजस्तो देखिदो रहेछ । सूर्य आफै कर्णालीमा हाम फालेर अस्ताउन लागेजस्तो दृश्य टिकटक बनाउनेका लागि अवसर थियो ।
गुलरिया टीकापुर हुलाकी सडक कोठियाघाट नजिक सामुदायिक जंगल पनि बाघका लागि बासस्थान भएकाले साथी कमल पन्थीले घाम डुब्दै गर्दा नेपाल भारत सीमा क्षेत्रको जंगलमा घुमाए । बाघ र हाम्रो लुकामारी भयो । देखादेख भएन । मधुवन नगरपालिका भग्रैया क्षेत्रमा बाघको आक्रमणबाट बाँचेर जीवन सुरु गरेका व्यक्ति बस्छन् । एक महिना अघि मात्र त्यही जंगलमा बाघले आक्रमण गरेर एक महिलालाई मा्ररेको खबर थियो ।
बर्दिया मधुवन नगरपालिका १ को डल्ला होमस्टे लोकप्रिय मानिन्छ । त्यो लोकप्रिय यसकारण कि बेलायतका राजकुमार (पूर्व) ह्यारी बर्दिया निकुञ्ज भ्रमण गर्ने बेला त्यही होमस्टेमा बसेका थिए । थारु संस्कृति, थारु परिकार, न्यानो आतिथ्यका लागि यो होमस्टे लोकप्रिय मानिन्छ । यस्तो लोकप्रिय होमस्टेमा एकछान नछाइ हिड्नु मजा हुँदैनथ्यो । त्यो यात्रा खल्लो हुन्थ्यो । फागनु २३ गते बेलुकाको खाना त्यही तय भएको थियो । वडा अध्यक्ष प्रशु चौधरीको प्रयासले सबै समुदायले लाभ लिएको यो क्षेत्र बाघ वैभवसँगै जोडिएको छ ।
प्रकृति, वन्यजन्तु र थारु कलासंस्कृति, परिकारको संगम डल्ला होमस्टेमा आउने पाहुना मनभरि छाप बोकेर फर्किदा रहेछन् । वडाअध्यक्ष चौधरी भन्छन्, ‘आउने पाहुना घरको क्षमता अनुसार बाँडेर राख्छौ । खाने, पिउने, बस्ने आफ्नै शैलीले व्यवस्था गर्छौं ।’
अर्को गन्तव्य कर्णाली चिसापानी । चिसापानी दुई कुराले बढी चिनिन्छ । पहिलो पुल र दोस्रो कर्णाली नदीको माछा । यी दुवै कुराको स्वाद लिन केही क्षण चिसापानीमा यात्रु अडिन्छन् । ठाकुरद्वारा चिसापानी पर्यटकीय हिसाबले पनि जोडिएको छ ।
चिसापानीमा पाइने सबै माछा कर्णाली नदीका होइनन् । तर कणालीकै भनेर पोखरीका माछा बेचिन्छन् । खास माछाका पारखीले मात्र कर्णालीका असली माछा चिन्न सक्छ । कर्णाली पुलमा सेल्फी, टिकटक बनाउनेहरुको हरेक दिन भिड लाग्छ, त्यत्तिकै कर्णालीको माछा खानेहरु पनि । सेल्फी, टिकटक रमाउनेसँगै माछाको स्वाद लिनेहरु पनि उत्तिकै भेटिन्छन् ।
स्थानीय ब्राण्ड अलि चलेपछि बिगार्ने चलन नै बसिसकेको छ भने पनि हुन्छ । कुनै बेला कर्णाली चिसापानीमा नदीको माछाले प्रख्यात भयो, देशभर चिनियो । व्यापार व्यवसाय फस्टाएपछि कर्णालीको भन्दै पोखरीको माछा खुवाउन थालियो । यसरी नै गयो भयो चिसापानीको माछामाथि मान्छेको विश्वास कति दिन रहला र ?
त्यहाँ नदीकै माछा पाउने ठाउँ पनि छ । कर्णालीको तिरैतिर उत्तर अछाम जाने कच्ची सडक हुँदै अघि बढेपछि असली कर्णालीको माछा भेटिन्छ । कर्णालीको तिरमा चर्चित मास्की दाइको होटल पुग्न सके नदीकै माछाको स्वाद भेट्न सकिन्छ । नदीको स्वादिलो माछा, वर्षाबाहेक अरुबेला देखिने निलो कर्णाली, कलात्मक पुल र पुलबाटै पश्चिमतिर सुरु हुने बर्दिया निकुञ्ज यात्राको संयोजनले घुमफिरमा निखार ल्याउँछ । हामीले त्यसै नगरेको भए यी सम्झनाहरु आउने नै थिएनन् ।
कर्णाली पुलबाट पूर्व लाग्ने बित्तिकै लुम्बिनी प्रदेश र पश्चिम लाग्ने बित्तिकै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्वागत द्वारले मुलुकमा संघीयता लागू भइसकेको झल्को दिन्छ । सामाजिक सञ्जालमा यी कुरा राखेपछि थाहा हुन्छ कि यात्रा कर्णाली चिसापानीतिर पुगेछ । कर्णालीको किनाराको बालुवाको साइनो कहाँ कहाँ गाँसिएको होला ? हामी नदी किनारामा पुगेपछि त्यसमा के के कोर्छौं, खुट्टाले उडाउँछौं । बालुवा बन्नु अघि ठोस ढुंगा कता कताबाट बज्रिंदै अस्तित्व समाप्त भएको होला, अनि बालुवामा परिणत भएको होला । त्यस दिन हामी बेपर्वाहा बालुवामा खेलेर ठाकुरद्वारा फर्कियौं ।
बाघ हेर्न हिँडेको हाम्रो टोली ।
फागुन २४ को बिहान ठाकुद्वारामा अलिअलि चिसो थियो । सिमल फूलेपछि जाडो सकिने संकेत हुन्छ । जाडो बिदा हुने बेलामा तराईमा घुम्नुको मजा बेग्लै हुन्छ । न जाडो, न गर्मी । जोखिमै मोलेर भए पनि बाघ हेर्ने रहर बोकेर हामी निकञ्जभित्र हिड्यौ ।
हामीसँग अनुभवी युवा गाइड हेमन्त आचार्य थिए । उनी आफैं वन्यजस्तु पीडित हुन् । तर उनी ती वन्यजन्तुको संरक्षणमा लागेका छन् । जंगली हात्तीको आक्रमणबाट बुवाको निधन भएको उनले सुनाए । प्रकृति, वन्यजन्तु, वातावरणप्रति अगाध मोह बोकेका उनी त्यसकै संरक्षणमा लागेका छन् । निकञ्ज प्रमुख विष्णुप्रसाद श्रेष्ठको सहयोगमा बाघ देख्न सकिने सम्भावित क्षेत्रको पहिचान गरी हिड्यौं । निकुञ्जभित्र विभिन्‍न ठाउँमा मचान बनाइएको छ, पर्यटकहरु मचानमा चढेर वन्यजस्तु अवलोकन गर्छन् । मचानमा चढेपछि जंगली जनावरबाट सुरक्षित पनि हुने र टाढाका जनावर देख्न सकिन्छ ।
त्यस दिन सुरुमा हामी हात्ती मचान क्षेत्रमा पुग्यौं । करिब दुई घण्टा कुरेपछि बाघ देखिने कुनै संकेत मिलेन । नजिक बाघ भए, नभएको संकेत नेचर गाइडलाई थाहा हुन्छ, हाम्रा गाइड हेमन्तले भने, ‘यतातिर बाघ भएको कुनै संकेत छैन, ढेडु, बाँदर, चित्तल, चराचुरुङ्गीले पनि संकेत गरेनन् । अब हिडौं ।’
निकुञ्ज र त्यस वरिपरि क्षेत्रमा बाघले मान्छे खाइरहेको थियो । पछिल्ला दिनमा हरेक महिना बाघले मान्छेमाथि आक्रमण गरिरहेको छ । मान्छे खाने बाघ भएको जंगलमा पैदल हिड्ने भनेपछि साथीहरु हच्किए । गाइड हेमन्तले आश्वस्त पार्दै भने, ‘म छु, नडराउनुस् सर । हिँडेरै जान रमाइलो हुन्छ ।’ अनि लाग्यौ जंगली जनावरको बाटो पछ्याउँदै । अझ मान्छे खाने बाघको पाइला पछ्याउँदै । कहिले खोला, कहिले काँस घारी हुँदै हाम्रो टोली हिँड्यो । सानो लट्ठी बोकेर बाघबाट सुरक्षित हुन सकिन्छ भन्ने मनमा लागेकै थिएन । तर पनि हामीलाई गाइडले लट्ठीले सुरक्षा गर्छ भने पछि समातेका थियौँ । हुन पनि कतिपय अवस्थामा लट्ठीको सहायताले बाघको आक्रमणबाट बचेका घटना पनि रहेछन् ।
हामी हात्ती मचान, गेरुवा नदी (कर्णालीको भंगालो) किनारैकिनार अघि बढ्दै गर्दा बाघ, गैंडाका आलो पाइला देखिन्थ्यो । गेरुवा नदीको पश्चिमपट्टिीको बस्तीमा बाघले बेलाबेला मान्छे, घरपालुवा जनावरलाई आक्रमण गरिरहेको थियो । हामी त्यही क्षेत्रमा लौरोको भरमा पैदल हिड्दै थियौं । तर ती जंगली जनावर मध्यान्ह कतै आराम गरेको हुनुपर्छ, हाम्रो नजरमा परेनन् । बाहिर उत्साह, मनमा त्रास बोकेर किङफिसर क्षेत्र हुँदै तीनकुने मचान पुग्दा करिब १० किलोमिटर पैदल हिँड्यौ ।
करिब १२० पाटे बाघ भएको निकुञ्जमा १० किलोमिटर पैदल हिँड्नु जोखमपूर्ण यात्रा थियो । जोखिमबीच दिनभर यात्रा गर्दा पनि बाघको दर्शन पाउन नसकेपछि खिन्न लाग्नु स्वभाविक थियो । बाघ देखिने मुख्य सम्भावित ठाउँबाट बाघ अन्तै सरेछ । किनकी निकुञ्जमा पानीको स्रोत सुक्दै गएकाले बस्तीतिर जनावर निस्कने क्रम बढेको स्थानीयको भनाइ छ । त्यसदिन बाघ देख्ने चाहना पुरा नभई बेलुका रातपरेपछि ठाकुरद्वारा फर्कियौं ।
बाघको आक्रमणबाट बाँच्न सफल रामजी थापा (स्थानीय व्यवसायी, प्रकृति संरक्षण कोषका कर्मचारी) ले एउटा उपाय सुझाए, बर्दिया निकुञ्जको अम्रेनीदेखि चिसापानीपूर्व १४ किलोमिटर क्षेत्रमा राति १० बजेपछि गाडी लिएर घुम्ने । राति ११ बजेपछि सवारीसाधनको चाप घटेपछि बाघ पक्का देखिने छ ।
निकुञ्ज सुरक्षा निकायसँग अनुमति लिएर हामी फागुन २४ गते १० बजेपछि महेन्द्र राजमार्ग (निकुञ्ज क्षेत्र) तिर लाग्यौं । जुन क्षेत्रमा गत पुसतिर मोटरसाइकलमा आमा र छोरा गइरहेको बेला बाघले आमालाई तानेर लगेको थियो । घुम्ना भनिने त्यो क्षेत्रमा खासगरी मध्यराति निस्कने थापाको भनाइ थियो । हामी राति १० बजे ठाकुरद्वाराबाट निकुञ्जको राजमार्गतिर लाग्यौं, जहाँ बाघ ओहोरदोहोर गरेको सूचना बेलाबेला मिल्छ । निकुञ्ज क्षेत्रको अम्रेनी चिसापानी क्षेत्रको १४ किलोमिटर सडकमा चार चक्कर लगाउँदा पनि बाघ देखिएन । त्यतिबेला राति १२ बज्नै लागेको थियो ।
हामी ठाकुरद्वारा फर्कने तयारीमा थियौं । त्यही बेला थापाले भने, ‘हामी एक दुई चक्कर अझै लगायौ भने बाघ देखिन सक्छ ।’ हामीले त्यसै गर्‍यौं । अर्को चक्कर लगाउन हामी चिसापानी पुगरे फर्कदै थियौं । त्यतिबेला राति १२ बजेको थियो, सडक किनारामा अजंगको बाघ देखियो । बाघ केही क्षण अडियो । हाम्रो गाडी नियालेर हेर्‍यो । अनि बिस्तारै उत्तरतर्फ आफ्नो बाटो लाग्यो । मध्यरातमा बाघ हेर्ने मिसन पुरा भयो । अनि हामी आफ्नो गन्तव्यतिर लाग्यौं । राति साढे १२ बजेतिर ठाकुरद्वारा पुगेपछि थापाजीले भने, होटल छेउमा गैडा आएको छ । हेर्न आउनुस् ।’
बाघ यति शक्तिशाली छ कि योमाथि धेरै शक्तिशाली सृजना भएका छन् ।
अंग्रेजी कवि विलियम ब्लेकले बाघमाथि लेखेको शक्तिशाली कविताको नेपाली अनुवादले बाघको शक्ति चित्रित गरेको छ ।
बाघ ! बाघ ! अध्यारो जंगलमा
उज्यालो गरी चम्किरहेको छ ।
कुन अमर हात वा आँखाहरुले
तिम्रो त्यो भयंकर एवम सन्तुलित आकृति बनाउन सक्यो होला ?
तिम्रा आँखा समुन्द्र अथवा आकाशका दुरीसम्म चम्कन्छन् होला ?
कस्ता पखेटामा उड्ने हिम्मत गर्‍यो होला ?
कस्ता हातले आगो समात्न सक्यो होला ?
अनि कुन पाखुरा र कुन कलाले
तिम्रो मुटुको स्नायुलाई बटार्न सक्यो होला ?
र जब तिम्रो मुटु धड्कन सुरु गर्यो,
आहा क्या डर लाग्दा हात, क्या डरलाग्दा खुट्टा ?
मार तोल कस्तो थियो होला ?
अनि तिमीलाई बाँध्ने सिक्री कस्तो थियो होला ?
कस्तो भट्टीमा तिम्रो दिमाग राखिएको थियो ?
कस्तो अचानो थियो होला ?
कसरी यस्तो भयंकर डरलाग्दो जीवलाई
समात्यो होला ?
जब ताराहरुले आफना भालाहरु
उँधोतिर फाले र स्वर्गलाई आफ्ना आँशुहरुले सिञ्चन गरे,
के ऊ (ईश्वर) आफ्नो काम देखेर रमायो होला ?
भेडाको पाठो बनाउनेले नै तिमीलाई बनाएको हो त ?
नेपालीमा पनि बाघमाथि कविता लेखिएका छन् । पञ्चायती शासकको विरोधमा कवि विमल निभाले बाघको विम्ब प्रयोग गरेर प्रहार गरेका थिए ।
कालो अँध्यारो देखिन्छ
उसको शरीरको पहेँलो बुट्टा
र फैलदै–फैलदै जान्छ
पहाड, उपत्यका र तराई
(कस्तो चमत्कार हो यो ।
विस्तारै विस्तारै एउटा देश
परिणत हुन्छ जंगलमा)
रगतको स्वाद सम्झेर
जब जब निस्कन्छ ऊ
आफ्नो बासस्थानबाट कसैले चिन्दैन उसलाई
किनभने उसले आफ्नो अनुहारमा
भिरेको हुन्छ ।
प्रकाशित : चैत्र २६, २०७७ १६:२५